Chikafu chakakodzera sechipo chekupa vana nevechiri kuyaruka
Unodya kakawanda sei uye zvakadini pakudya kwakakodzera?
Zvimwe zvinotapira zvinotenderwa
Mushonga wakagadzikana wekudya kwakakodzera chaizvoizvo unosanganisira kuenzaniswa kwakanyatsogadzirwa kwezvipfuwo uye zvekudya. Kugadzirwa kwemagetsi kwakanyanya kunoumbwa nema carbohydrates (50-55 muzana) zvakadai sezviyo, miriwo, mbatatisi nemichero.
chiduku inorwara mafuta chete (kusvika 30 muzana) kuti miriwo kwemafuta kana mafuta kana chete chidimbu chiduku mhuka uye miriwo mapuroteni (10-15 muzana) chinodikanwa.
Kana chiyero chechisikigo chikawanikwa pano, mwana anotariswa zvakanaka uye haadi chirongwa chekuwedzera.
Nzira yekuziva sei kusakondwa?
Anopa mwana rimwe divi, akadai evasingatombonamati miriwo pasina mukaka, nyama yakawandisa, pamwe yakachena uye pastries kana vakawanda zvihwitsi, ipapo kusava mafuta acids, kuronda zvinhu uye mavhitaminzi vanogona kuchinja.
Kana kakawanda imwe inonaka inoshandiswa, somuenzaniso munyu, inotapira, yakasviba, izvi zvinokanganisa kutaridzika kwekunzwa kwenyama. Saka, zvakakosha kuwana vana vaishandiswa kudya zvishoma kubva pane zvokudya.
Kudya kwakanaka uye kwakanakisisa kunovimbisa 3-5 nguva dzekudya zuva rose. Zvokudya imwe chete inodziya inofanira kuiswa. Zvakanaka, dumbu rinonzwa kana nzara isingasviki.
Sezvokudya, unogona kunakidzwa nezvibereko nemiriwo, zvimwe chingwa kana mhuka. Nokuda kwekudya kunopisa mazambatata, ruvara rutsvuku, pasta, miriwo kana saladi inokurudzirwa. Zvimwe kupa zvishoma hove uye nyama yechipfuva ndiro. Sekunwa, mvura ichiripo, michero uye maruva chaiwo zvishoma. Kunwa shuga kunofanira kudziviswa, semiti yemichero inenge ine shuga ye10 muzana.
Misi ine zvakasiyana-siyana zvezvinhu zvakakosha zvakadai. Sa calcium, phosphorus, protein, zinc, iodine uye vitamini B2 uye B1, iyo inonyanya kukosha muchikamu chokukura. Kana paine mukaka kurwisa, taura kune vanodya noutano.
Kudya inhau yezvakasikwa
Kazhinji vanhu vakuru vanoyera kudya kwevana vavo kudya maererano nemaitiro avo okudya. Saka kutarisirwa kunofanira kutorwa kusapiwa vana vakura zvikamu.
Mutumbi unowanzowana zvaunoda. Zvinowanzoitika kuti vana havadyi zvakafanana zuva rimwe nerimwe. Zvichienderana nezera, rudzi rwemuviri, muviri uye chiitiko chekuita, kudya kunofanira kuchinjwa mumwe nomumwe.
Kunyarara uye vana vaduku vaizoputirwa nehuwandu hwe nyama nemafuta, asi panzvimbo pacho vanoda zvokudya zvishoma, sezvo simba ravo rekugadzirisa muviri rinogona kuita izvi zviri nani. Pre-kubikwa mishonga uye zvokudya zvinodziya zvinoparidzirwa zvakanyanya mudiki zvishoma zuva rose.
Mitemo inogona kukurudzira kufara
Zvimwe zvirongwa zvishomanana zvekudya zvakakosha kuita kuti mudumbu wako uchinzwe zvakanaka. Nokuti kudya kwakagadzikana kunotanga pakutanga kuruma. Nokuda kwekudya tinoda kupfuura nguva yose nekuzorora. Nokudaro, pfupa shoma pfupi uye mushure mekudya zvakakosha. Kuvhiringidza kwakafanana neredhiyo, TV, kuverenga kana kufara kunofanira kudziviswa. Uye sezviya zvakakura: "Ziso rinodya newe."
Izvo zvinoshandiswa nekutapira kwakanaka zvinogona kunge zvisinganzwisisiki, nekuti kunyange mukaka waamai unonaka kunotapira.
Sweet munching pasina kuora mwoyo
Sweets yakakwana inorambidzwa ichaoma kuomerera. Kunyange Piramidhi Yezvokudya yakapa kunobata nzvimbo pasi pemusoro unoti "Extras", boka rezvokudya zvinoregererwa.
Sweets hazvirambidzwi mumitemo. Zvisinei, Research Institute for Child Nutrition (FKE) inokurudzira kuti usatora zvinodarika 10 muzana yezuva nezuva simba rinowanikwa nenzira ye "extras". Somuenzaniso, nokuda kwevana vane makore 7-9, izvi zvinenge zvakapoteredza 180 kcal kana nezve 45 gramu yehuga kana 20 gramu yemafuta.
Utano hwakanaka hwevana
Proteine ​​chingwa | chikafu
Lactose kusawirirana | Health utano
Waini | Nutrition uye zvinwiwa